Sidee PR6 backlinks saameyn kartaa site aad SEO?
Qof kastaa wuu ogyahay in ilaha ugu wanaagsan ee dhismaha tayada la xidhiidha ay yihiin kuwa ugu sareeya ee PageRank. Waxay u adeegaan inay sare u qaadaan xawaarida raadinta raadinta oo aad u guurto meesha aad ka raadineyso natiijooyinka raadinta.
Ka hor inta aanad bilaabin inaad abuurto astaanta dhabarka, waxaad u baahan tahay inaad raadiso oo aad eegto PR6, PR7, iyo goobaha kale ee goobaha wax lagu baaro. PageRank waa qeyb muhiim ah oo muujinaya awoodda shabakadda. Waxay u adeegtaa si loo cabbiro muhiimada bogga internetka adigoo tirinaya lambarka iyo tayada xiriiriyeyaasha ee tilmaamaya. Si kale haddii loo dhigo, waa nidaam qiimeyn oo kakan oo ay garteen Google si loo darajeeyo goobaha webka. Ugu yaraan PageRank waa eber, ugu badnaanna waa toban. Maalmaheenna, PageRank maaha adeeg keliya oo lagu cabbiro bogga guusha. Kuma dammaanad qaadayso rikoodhka raadinta sare, ama kororka gaadiidka.
Si kastaba ha ahaatee, helitaanka backlinks laga helo goobaha PR ayaa weli lagama maarmaan u ah hagaajinta boggaaga dhismaha. Google wuxuu siiyaa kaliya ilaha munaasabka ah ee mudnaanta leh ee shabakada webka ee leh PageRank sare. Taasi waa sababta abuuritaanka backlinks waxaa kuugu sheegaya Google qiimaha qiimahaaga. Haddii farsamada xiriirkaaga ay ka kooban tahay PR6 - PR10 backlinks, waxaad kuxidhin doontaa TOP Google.
Noocyada aad ku heli karto PR6 backlinks
Ka baddel dhabarkaaga tartanka tartanka
Ma aha oo kaliya hal qof oo webmaster ah oo ku jira nuugaaga oo doonaya inuu abuuro xiriir wanaagsan. Inta badan ilaha websaydhka TOP waxay ku leeyihiin ololeyaal isku xiran oo xooggan waxayna si joogto ah raadinayaan fursadaha dhismaha cusub. U aamina ama ha dhihin, waxaad ka faa'iideysan kartaa dib uqorshahaaga tartanka. Waxay sameeyeen dhammaan xiriirinta dhismaha ee adiga kugu habboon. Sidaa darteed, wax kasta oo aad u baahan tahay waa dib uqurxin dhab ah oo leh qaabka RLR.
Waxaad u baahan tahay inaad sameysid cilmi-baaris tartan ah isla markaana aad ogaatid sida ay tartamayaashaaga hoose u dhisayaan xiriiro. Ugu dambeyntiina, waxaad u baahan tahay inaad ku dallacdo ama aad amaahato kaliya xeeladahooda. Waxaad la soo xidhiidhi kartaa ilaha meelaha aad tartamayaasha ku abuurtay xiriirkooda iyo waydiiso fursadaha fursadaha dhismaha ee domainkaaga.
Waxaa laga yaabaa inaad ka maqashay farsamooyinka dhismaha ee xiriirinta hirgalinta ee ku takhasusay SEO specialist Brian Dean. Waa sahlan, laakiin u keen dakhtar websaydhin leh natiijooyin fiican.
Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad sameysid cilmi-baaris suuqa ah oo aad ka heli karto maqaalo iyo joornaalo caan ah. Markaa waxaad u baahan tahay inaad sameyso mawduuc aad ka akhriso alaabta aad akhrisatay. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad iska ilaaliso nuqul daabac ah maaddaama ay kuula ciyaari doonto adiga. Waa inaad abuurtaa maqaal gaar ah oo ku salaysan cilmi-baaristaada. Markaa waxaad u baahan tahay inaad isku xirto qaybta maqaarka ee hore si aad u hubiso in dadka isticmaala ay ku xiran yihiin qaybtaada cusub ee cusub.
Shotgun farsamada casriga ah
Farsamadan dhisme ee isku xirnaanta waxay la mid tahay kii hore. Si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay hal farqi weyn. Waxay u shaqeyneysaa kuwa ugu wanaagsan ee horey u haysta sheekada u baahan in la hormariyo. Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad ku tiirsato foornooyin badan oo la xidhiidha fursadaha. Farsamadani waxay ku siinaysaa fursad aad ku heshid farabadan bogag kale oo ku salaysan mawduuc isku mid ah adiga oo sidoo kale leh xiriiro badan oo tilmaamaya Source .